I-Tribal Drawing-room Ilungele I-Getaway Ethule@VNVECT - I-Airbnb
I-Tribal Drawing-room Ilungele I-Getaway Ethule@VNVECT
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Dung
Fihla empilweni yasedolobheni.
Vuka usanda sekuseni uzwe izinyoni zicula.
Ukubamba ukuphuma nokushona kwelanga esitezi esiphezulu ngenkomishi yetiye elishisayo.
Ifulethi lisesitezi sesi-4 se-motel, etholakala ku-36 km entshonalanga ye-Hanoi.
Umamukeli uzokunikeza ukhiye.
Amakamelo amabili anethezeke ngokuphelele kumuntu ohamba yedwa, izithandani futhi asebenza kahle kubantu aba-4.
Iwindi lezinhlangothi ezintathu linikeza umbono omuhle wentaba. Thola umoya onokuthula omangalisayo ekuseni ngesenzo esilula sokuvula wonke amawindi.
Jabulela ukuzijabulisa ku-smart TV nge-Netflix nendawo yokufunda.
Ukushona kwelanga kupholile endaweni encane futhi ungakhohlwa ukuvala iwindi ngaphambi kokuba isibhakabhaka sibe mnyama uma ungafuni ukulala kulo mbhede othakazelisayo onomiyane nezinye izinambuzane ^^.
Ukwengeza, ungakwazi ukuqasha motobike ukuhamba. Kubiza u-5$/ngosuku.
Kungamakhilomitha angu-2 kuphela ukuya eVietnam National Village for Ethenic Culture and Tourism, lapho ungavakashela khona izindlu eziningi eziyizimpawu zezinhlanga zaseVietnam kusukela eNyakatho kuya eNingizimu yeVietnam kanye neminye imihlobiso ekhethekile engeyeqembu elincane ngalinye. Eminye imikhosi, imisebenzi yansuku zonke, ingoma nomdanso kuhlelwa kabusha emadolobhaneni (kaningi)
Kungamakhilomitha angu-12 ukuya e-Ba Vi National Park, okungenye yezindawo ezidume kakhulu eVietnam ngobuhle bemvelo obuvelele, futhi igxile entabeni eneziqongo ezintathu egxumagxumayo ngaphandle kwezwe. Ipaki kazwelonke inikeza ukuphunyuka okuhle kwedolobha elinomoya opholile wentaba opholile endaweni engaqondakali yomoya wamafu, ihlathi kanye nehlathi lemvula elishisayo.
P/S: Ngihlale ngibheke ngabomvu ukusingatha abantu abadumile ngakho ngizobe ngilinde umbuzo ovela kuwe bese siqala ukuxoxa ngeminye imininingwane kusuka lapho.
Bangasho kuphela ukuthi Sawubona kodwa bakhulume isiNgisi ngomzimba ^^
Ungangithumelela umbhalo ngomakhalekhukhwini ^^